Liverpool Oo Ka Warbixisay Xaalada Caafimaad Ee Roberto Firmino Iyo Tababarkii Maanta Ee Jurgen Klopp Bixiyay. - Gool24.Net
Liverpool ayaa ka warbixisay xaalada caafimaad ee gool dhaliyaha kooxdeeda ee Roberto Firmino kaas oo dagaal ugu jira in uu taam buuxa u noqdo finalka UEFA Champions League.
Jurgen Klopp iyo jamaahiirta kooxdiisa Liverpool ayaa war fiican maanta helay kadib markii uu Roberto Firmino ka soo muuqday tababarkii ka qabsoobay Marbella training camp.
Roberto Firmino ayaa dhaawac ku seegay kulamadii ugu danbeeyay ee ay Liverpool soo ciyaartay oo uu ku jiro kulankii ay sida mucjiada lahayd u soo dhaafeen Barcelona ee lugtii labaad ee afar dhamaadka Champions League.
Qoraal ay Liverpool kaga hadashay xaalada Roberto Firmino ayaa lagu yidhi: “Roberto Firmino waxa uu maanta la tababartay ciyaartoyda kooxdiisa kadib dhaawicii muruqa ee isaga u diiday saddexdii kulan ee Liverpool ugu danbeeyay”.
Waxaa warbixinta Liverpool lagu sheegay in Roberto Firmino uu maanta ka qayb qaatay qaybtii hore ee tababarkii kowaad ee ka dhacay xarunta tababarka ee Marbella training camp si uu uga shaqeeyo taam ahaanshihiisa buuxa.
Roberto Firmino ayaa shaqaalaha caafimaadka Liverpool kula sii shaqaynayay Marbella training camp ka hor intii ayna shalay soo gaadhin ciyaartoyda kale ee uu Klopp hogaaminayay.
Liverpool ayaa qorshaysatay in ay lix maalmood ay tababar ku qaadato Marbella training camp si ay iskugu diyaarinayaan finalka UEFA Champions league ee magaalada Madrid ka qabsoomi doona.
In maanta uu Roberto Firmino ku soo laabtay tababarka kooxdiisu waxay si wayn u farxad galinaysaa Jurgen Klopp oo doonaya in uu kulanka Tottenham haysto ciyaartoyda kooxdiisa ugu muhiimsan.
Si kastaba ha ahaatee, dhawrka maalmood ee soo socda ayaa muhiimad wayn u yeelan doona soo kabsashada Roberto Firmino si uu diyaar ugu noqdo finalka Champions League ee June 1.